Ogaden News Agency (ONA) – Khubarada Kiimikada Suuriya oo Loo Ogolaaday Inay Baadhitaan Sameeyaan.
Khubarada Kiimikada Suuriya oo Loo Ogolaaday Inay Baadhitaan Sameeyaan.
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2018
Khuburo dhanka kiimikooyinka ah ayaa loo ogolaan doonaa in ay booqdaan goobtii la sheegay in uu weerarka kiimikada ah ka dhacay Arbacadii, sida ay dawlada Ruushku sheegtay.
Koox caalami ah ayaa Suuriya ku sugnayd tan iyo Sabtidii, balse looma ogolaanin in ay booqdaan Douma. Weerarkii 7 Abriil dhacay ayaa horseeday weerar dhanka cirka ah oo dawladdaha Brirain, Maraykanka iyo Faransiisku ay ku qaadeen xarumo ay dawlada Suuriya leedahay.
Ammin hore oo Talaadadii ahna warbaahinta dawladda Suuriya ayaa sheegtay in waaxda difaaca dalkaasi ay ka jawaabtay gantaallo lagu soo weeraray magaakada galbeedka ku taalla ee Xoms. Gantaalladaas ayaa lagu bartilmaameedsaday saldhigga ciidammada cirka ee Shayrat sida ay warbaahinta dawladdu sheegtay, balse faahfaahin kama aysan bixinin cidda soo gantay.
Warbixin kale oo ka timid malayshiyada Xisbullah ee ay Iiraan taageerto ayaa lagu sheegay in hannaanka difaaca ee Suuriya uu qabtay gantaallo lagu soo ganay garoonka milatariga ee Duuma oo ku yaalla waqooyiga bari ee magaalada Dimishiq.